Redmi Xusuusin 7: Sooc, qiimayn iyo bilaabid | Androidsis
Redmi Xusuusin 7: Taleefanka cusub ee Xiaomi
Bilowgii bisha waxaa la xaqiijiyay in Xiaomi ay soo bandhigeyso qaab cusub oo ka mid ah heerka Redmi Janaayo 10. Waxaa sidoo kale lagu dhawaaqay in Redmi uu noqonayo sumad madax-bannaan, sidaa darteedna sumadda Shiinaha ay doonayso inay ku guuleysato qaybtan suuqa. Ugu dambeyntiina maalintii ayaa timid oo waxaan horeyba u ogaanay taleefanka cusub, oo ah kan ugu horreeya ee noocaas ah. Waxay ku saabsan tahay Redmi Note 7. Qalab u muuqda mid dhammaystiran oo qiime jaban leh.
Qoraalkan 'Redmi Note 7' wuxuu yimid sidii mid ka mid ah qiimaha ugu fiican ee taleefannada lacagta Ka imanaya suuqa. Marka waa hubaal inay guul weyn u noqonayso sumaddan cusub ee la soo saaray ee Xiaomi. Maxaan ka filan karnaa qalabkan?
Xiaomi waxay bedeshay astaanta, laakiin waxay kusii socotaa sharad isla mabaadi'da noocyada taleefannada ah Waxay u taagan tahay gaar ahaan kaamirooyinka gadaal, waxay sidoo kale soo bandhigeysaa shaashad leh iska caabin weyn waxayna sidoo kale la socotaa amar degdeg ah, sidaas moodada maanta ee Android. Aad u dhameystiran.
1 Tilmaamaha Redmi Xusuusin 7
2 Kamarad ahaan meel adag
Tilmaamaha Redmi Xusuusin 7
Marka la eego naqshadeynta, waxaan arki karnaa in Redmi Note 7 uu raacayo isbeddellada suuqa ee Android. Waxaad sharad on a shaashad leh shaashad leh qaab dhibic biyo ah. Marka hore qalabka waxaa loo adeegsadaa shaashadan. Dhabarka gadaashiisa waxaan ku haynaa kamarad labajibbaaran, taas oo ballanqaadaysa inay la yaabto. Kuwani waa qeexitaankiisa buuxa:
Shaashadda: 6,3-inch Incell LTPS oo leh 2340 x 1080 xalka pixel iyo saamiga 19,5: 9
Kaydinta gudaha: 32/64 GB (Kordhin kara ilaa 512 GB oo leh kaarka microSD)
Kaarka sawirka: 512 Adreno
Kaamirada gadaal: 48 +5 MP oo leh Flash Flash
Kaamirada hore: 13 MP
Xiriirinta: Bluetooth 5.0, 4G / LTE, Dual SIM, WiFi 802.11 Dual, isku xira USB-C
Kale: Furitaanka aqoonsiga wajiga, dareeraha faraha ee dhabarka
Battery: 4000 Mah oo leh 18W lacag deg deg ah
Nidaamka Howlgalka: Android 9.0 Pie oo leh MIUI 10 oo ah lakab habeyn ah
Horudhaca astaanta ayaa nooga tagaysa naqshad aan wax badan kaga aragno suuqa, sidaan soo sheegnay, oo leh heerkan oo ah qaab dhibic biyo ah. Waxaa loo soo bandhigay sidii naqshad wanaagsan, halkaas oo midabada ay ka taagan yihiin xagga dambe. Tan iyo markii ay calaamadda Shiinaha ku soo biirtay isbeddelka cufnaanta, oo la soo saaray sanadkii hore iyada oo ay la socoto shirkadda Huawei-dhamaadka sare
Waa in la sheegaa in Redmi Note 7 ay ina keeneyso qeexitaannada aynaan ku arkin taleefan noocan ah. Tani waa nooc inta badan nooga taga qaabab hoose ama hooseeya. Xaaladdan oo kale, markii ugu horreysay oo ah nooc madax-bannaan, waxay nooga tagayaan Redmi-kii ugu fiicnaa ee illaa iyo hadda la soo saaray. Dhexdhexaad dhexdhexaad ah oo leh tusaalooyin wanaagsan, shaashad weyn, processor wanaagsan, iskudhaf noocyo kala duwan oo RAM ah iyo keydinta, kaamirooyin wanaagsan, iyo bateri weyn
Kamarad ahaan meel adag
Kaamirooyinka ayaa ah mid ka mid ah dhinacyada sida weyn u soo jiita dareenka Redmi Note 7. Maadaama gadaal ay la socoto a 48 + 5 MP laba kamarad leh f / 1.6 aperture. Marka xaqiiqda ayaa ah in wax badan laga filayo kamaradahaas aaladda dhexda ku jirta. Su’aashu waxay tahay inay cabirayaan iyo in kale. Laakiin iyada oo la tixgelinayo in aan aragno moodallo badan oo leh 48 MP toddobaadyadan, sawirradu waa inay ahaadaan kuwo tayo leh.
Ogeysiisyada qiimaha, nooca Shiinaha ayaa horay u soo bandhigayay kamaradda qalabka. Waxay ku siinaysaa dareenka ah in kamaradda dambe ay na siin doonto qaraar sare iyo waxqabad wanaagsan iftiinka hooseeya. Sidoo kale, ha iloobin taas waxaan leenahay caqli macmal ah taas oo kor u qaadeysa kaamirooyinkaan, si waxqabad wanaagsan loo helo.
Redmi Xusuusin 7 horey ayaa looga dhawaaqay Shiinaha, suuqa kaliya ee ay ku bilaabatay la xaqiijiyay haatan. In kasta oo wax walba ay muujinayaan inaan sidoo kale ku arki doonno taleefanka Yurub. Laakiin markay waxaani dhacayaan waa wax aynaan ogeyn xilligan. Waxaa la filayaa inay ku timaado midabyo kala duwan, sida buluug, madow ama casaan.
. Waxa aan ognahay waa qiimaha taleefanka markii lagu bilaabay Shiinaha:
Moodal leh 3 + 32 GB: Qiimaha 999 yuan (qiyaastii 130 euro si loo beddelo)
Nooca leh 4 + 64GB: 1199 yuan oo qiimo ah (qiyaastii 150 euro si loo beddelo)
Moodal leh 6 + 64 GB: Qiimaha 1399 yuan (qiyaastii 180 euro si loo beddelo)
Intaa waxaa dheer, shirkaddu waxay xaqiijisay inay ka shaqeynayaan Redmi Note 7 Pro, oo ku imaan lahaa kamarad 48 MP ah sidoo kale. Waxba kama ogin xilligan la joogo markii la bilaabay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Redmi Xusuusin 7: Taleefanka cusub ee Xiaomi